ထူးဆန်းစွာ အသက်ရှင်လျက် မြေ မြု ပ်ခံ ခဲ့ ရသူများ | Buzzy
ထူးဆန်းစွာ အသက်ရှင်လျက် မြေ မြု ပ်ခံ ခဲ့ ရသူများ
အသက်ရှင်နေသော်လည်း မြေမြုပ် ခံ ခဲ့ရသည့် အတွက် ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရ....
Jessica Lunsford ကို အလျား ၂ ပေ ၊အနက် ၃ ပေခန့် ရှိတဲ့ ကျင်းထဲမှာ အကြမ်းဖက်သမားတွေက သားမယားပြု ကျင့်ပြီး အရှင်လတ်လတ် မြေမြုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူမကို၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ Homosassa မှာ ရှိတဲ့ သူမရဲ. နေအိမ်ကနေ ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရ ပြီး အသက်ရှင်လျက် မြေမြုပ်ခံခဲ့ရတာပါ။သူမကို အကြမ်းဖက်သမားက ကျင်းထဲမှာ ထည့်ပြီး သစ်ရွက်တွေကို ဖုံးထားခဲ့တာပါ။
Jessica Lunsford ကို အလြား ၂ ပေ ၊အနကျ ၃ ပခေနျ့ ရှိတဲ့ ကငျြးထဲမှာ အကွမျးဖကျသမားတှကေ သားမယားပွု ကငျြ့ပွီး အရှငျလတျလတျ မွမွေုပျခဲ့ပါတယျ။သူမကို၂၀၀၅ ခုနှဈမှာ Homosassa မှာ ရှိတဲ့ သူမရဲ. နအေိမျကနေ ပွနျပေးဆှဲခံခဲ့ရ ပွီး အသကျရှငျလကျြ မွမွေုပျခံခဲ့ရတာပါ။သူမကို အကွမျးဖကျသမားက ကငျြးထဲမှာ ထညျ့ပွီး သဈရှကျတှကေို ဖုံးထားခဲ့တာပါ။
၂၀၁၅ ခု နှစ် မှာ Neysi Perez ဆိုတဲ့ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦး အသက်ရှင်လျက် မြေမြုပ် ခံခဲရပါတယ်။ သူမဟာလည်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု ကို ခံ ရပြီး အရှင်လတ်လတ် မြေမြှုပ် ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၅ ခု နှဈ မှာ Neysi Perez ဆိုတဲ့ အသကျ ၁၆ နှဈအရှယျ မိနျးကလေးတဈဦး အသကျရှငျလကျြ မွမွေုပျ ခံခဲရပါတယျ။ သူမဟာလညျး လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အကွမျးဖကျမှု ကို ခံ ရပွီး အရှငျလတျလတျ မွမွှေုပျ ခံခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။
Angelo Hays ကို တော့ ၁၉၃၇ ခုနှစ် မှာ စက်ဘီးစီး နေစဉ် မတော်တဆကြောင့် ပြင်သစ်မှာ ရုတ်တရက် သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ ကို လည်း ၂ ရက် နေမှ အမှန်တကယ် သေဆုံးမှု မရှိဘူးဆိုတာကို သိခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက အလောင်းကို ဖော်ထုတ်ကြည့်တော့မှ အသက် အနည်းငယ်ရှူ နေတာကို တွေ့ ခဲ့ရတာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် ဆေးရုံကို ချက်ချင်း ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရတာပါတဲ့။
Angelo Hays ကို တော့ ၁၉၃၇ ခုနှဈ မှာ စကျဘီးစီး နစေဉျ မတျောတဆကွောငျ့ ပွငျသဈမှာ ရုတျတရကျ သဆေုံးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သူ့ ကို လညျး ၂ ရကျ နမှေ အမှနျတကယျ သဆေုံးမှု မရှိဘူးဆိုတာကို သိခဲ့ရပါတယျ။ ဆရာဝနျတှကေ အလောငျးကို ဖျောထုတျကွညျ့တော့မှ အသကျ အနညျးငယျရှူ နတောကို တှေ့ ခဲ့ရတာပါ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ ဆေးရုံကို ခကျြခငျြး ချေါဆောငျခဲ့ရတာပါတဲ့။
Mrs. Boger ကို ၁၈၉၃ ခု နှစ်မှာ ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားတာတွေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေရဲ. ဆေးစစ်ချက်အရ သေဆုံးကြောင်းအတည်ပြု ခဲ့တဲ့ အတွက် မြုပ် နှံ ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က Mrs. Boger ရဲ. အမျိုး သားကို ပြောခဲ့တာကတော့ " ဟာ မသေခင်မှာ စိတ်ချောက်ခြား စရာမျိုး ဖြစ်ခဲ့တာကို တွေ့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။တကယ်တော့ သူမဟာ အမှန်တကယ်မသေ ခဲ့ ပဲမြေ မြုပ် ခံခဲ့ရတာပါ။
Mrs. Boger ကို ၁၈၉၃ ခု နှဈမှာ ရုတျတရကျ သဆေုံးသှားတာတှေ့ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ဆရာဝနျတှရေဲ. ဆေးစဈခကျြအရ သဆေုံးကွောငျးအတညျပွု ခဲ့တဲ့ အတှကျ မွုပျ နှံ ခဲ့ပါတယျ။ သူမရဲ. သူငယျခငျြးတဈယောကျက Mrs. Boger ရဲ. အမြိုး သားကို ပွောခဲ့တာကတော့ " ဟာ မသခေငျမှာ စိတျခြောကျခွား စရာမြိုး ဖွဈခဲ့တာကို တှေ့ ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။တကယျတော့ သူမဟာ အမှနျတကယျမသေ ခဲ့ ပဲမွေ မွုပျ ခံခဲ့ရတာပါ။
ဇန်န၀ါရီ လ ၁၀ ရက် ၁၈၈၄ ခု နှစ်မှာ Anna ကို သစ်တောထဲမှာ မြှုပ် နှံ လိုက်ပါတယ်။ သူမဟာ သူမအစ်ကို ရဲ. မင်္ဂလာပွဲမှာ လှေကားပေါ်ကပြု တ်ကျသေဆုံးခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူမရဲ. အသံကို အဲ့ဒီအနီးမှာ ကြားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူမဟာ အမှန်တကယ်မသေဆုံးသေးကြောင်းတွေ့ ရှိခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သူမကို ပြန်လည် ဖော်ယူလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သူမရဲ. ရုန်ကန်ပြီး လှုပ်ရှားထားတဲ့ အချက်တွေကို တွေ့ ရပါတယ်။
ဇနျနဝါရီ လ ၁၀ ရကျ ၁၈၈၄ ခု နှဈမှာ Anna ကို သဈတောထဲမှာ မွှုပျ နှံ လိုကျပါတယျ။ သူမဟာ သူမအဈကို ရဲ. မင်ျဂလာပှဲမှာ လှကေားပျေါကပွု တျကသြဆေုံးခဲ့တာပါ။ ဒါပမေဲ့ သူမရဲ. အသံကို အဲ့ဒီအနီးမှာ ကွားနရေတာဖွဈတဲ့အတှကျ သူမဟာ အမှနျတကယျမသဆေုံးသေးကွောငျးတှေ့ ရှိခဲ့ရပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ သူမကို ပွနျလညျ ဖျောယူလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ သူမရဲ. ရုနျကနျပွီး လှုပျရှားထားတဲ့ အခကျြတှကေို တှေ့ ရပါတယျ။